Umaki: izindela ze-imeyili | Martech Zone
Tag: izindela ze-imeyili
NgoLwesine, July 27, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Nonke nizwile izikhalazo zami ngokungabi khona kwentuthuko ekusekelweni kwe-imeyili kule minyaka edlule ngakho-ke angizukuchitha (isikhathi esiningi kakhulu) ngikhala ngakho. Ngifisa nje ukuthi iklayenti elilodwa le-imeyili elikhulu (uhlelo lokusebenza noma isiphequluli), liphume ephaketheni bese lizama ukuxhasa ngokuphelele izinhlobo zakamuva ze-HTML ne-CSS. Angingabazi ukuthi amashumi ezigidi zamaRandi asetshenziswa yizinkampani ukwenza kahle ama-imeyili awo. Yilokho
Akungabazeki ukuthi ukuklama nokwenza umkhankaso we-imeyili wokulahla inqola yokuthenga osebenzayo usebenza. Eqinisweni, kuvulwe ngaphezu kwe-10% yama-imeyili okushiya inqola. Futhi inani le-oda elijwayelekile lokuthengwa ngama-imeyili okushiywa kwenqola liphakeme ngo-15% kunokuthenga okujwayelekile. Awukwazi ukukala izinhloso eziningi ukwedlula isivakashi esizeni sakho esengeza into enqoleni yakho yokuthenga! Njengabakhangisi, ayikho into ebuhlungu kakhulu kunokuqala ukubona ukungena okukhulu
Sisize amaklayenti nge-internationalisation (I18N) futhi, ukubeka nje, akumnandi. Ama-nuances wokufaka ikhodi, ukuhumusha, nokwenza okwasendaweni akwenze kube inqubo eyinkimbinkimbi. Uma kwenziwe kabi, kungaba amahloni ngendlela exakile… ingasaphathwa eyokungasebenzi. Kepha ama-70% wabasebenzisi be-inthanethi abayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-2.3 emhlabeni akusizo izikhulumi zesiNgisi zomdabu futhi yonke imali engu- $ 1 esetshenziselwe ukwenza indawo itholwe ine-ROI engu- $ 25, ngakho-ke isisusa sikhona sokuba ibhizinisi lakho lihambe
NgoLwesine, Februwari 11, 2016 Douglas Karr
Sisanda kwabelana nge-infographic yokuthi ungasiguqula kanjani isilinganiso sakho sokuheha ukubandakanyeka kwe-imeyili, ngezifundo ezithile zezibalo nezibalo zalokho okungenziwa ngazo. Le infographic evela kuma-Monks e-imeyili, ama-imeyili wokuphinda uhlanganyele, ayise ezingeni lemininingwane ejulile ukunikeza uhlelo lomkhankaso langempela lokuguqula ukubola kokusebenza kwe-imeyili yakho. Uhlu lwe-imeyili olumaphakathi lubola ngo-25% njalo ngonyaka. Futhi, Ngokombiko we-2013 Marketing Sherpa, ama-75% wababhalisile be-imeyili